Vhidhiyo nyowani yemamiriro emabasa eApple's Campus 2 | IPhone nhau
Sekutanga kwese kwemwedzi, tinokuratidza zvakare shanduko yeApple Campus 2, uko kambani iri kuronga kutamira gore risati rapera, kana mabasa achiramba achienderera mberi padanho razvino, mushure mekunonoka kwakawanda nekuda kwematambudziko nekontrakta wekuvaka. Muvhidhiyo iyi nyowani tinogona kuona kufambira mberi kwemabasa kubva mumwedzi wapfuura, kufambira mberi kwekutanga pakuona kunogona kuenda kusingaonekwe nevashandisi vazhinji, asi izvo zvinoratidza kuti zuva rekupedzisa rave padyo uye padyo, mushure memakore akati wandei.
Muvhidhiyo iyi nyowani, yakanyorwa zvakare naWeTuber Matthew Roberts, unogona kuona kuti mabasa akafambira mberi sei pachikamu chepamusoro chezvivakwa zvinoumba denderedzwa rakaumbwa neUFO, uko vatanga kuisa michina yemuchina nemapombi ayo ekuparadzira. Uye zvakare, isu tinogona zvakare kuona kuti huwandu hwemaseru ezuva ayo anonyanya kupa simba zvese izvi zvivakwa akawedzera zvakanyanya, kunyangwe chinhu chakanakisa kuita kutarisa vhidhiyo.
Zvakare, kana isu taona mavhidhiyo apfuura, tinogona kuona kuti sei iyo yekupaka iyo inokwana dzinopfuura 11.000 mota inenge yapera. Iyi paka yemota ine zvakare magetsi ezuva kumusoro. Horoitori itsva iyo Apple ichabata mharidzo diki, yakatopedzwa zvizere pamwe nejimu yevashandi vekambani.
Kana mabasa apera, vazhinji vevashandi vari kushanda pazvivakwa zveCupertino ichaenda kune itsva Apple zvivakwa, kumisikidzwa kwakarotwa naSteve Jobs muzuva rake uye izvo zvave kuda kupera, nokudaro kuzadzisa kurota kwehunyanzvi uyo akachinja magumo eApple paakadzokera kukambani muna 1997, imwe yenguva dzakaipisisa kukambani iyi izere nhoroondo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vhidhiyo nyowani yemamiriro emabasa eApple Campus 2